Windows ကို USB Stick မှ Install လုပ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Windows ကို USB Stick မှ Install လုပ်ခြင်း
Windows ကို USB Stick မှ Install လုပ်ခြင်း
Posted by kai on Jul 19, 2010 in Computers & Technology, Know-How, DIY, Software & Links |4comments
Install Windows XP onaMini-Note USB stick method)
အပေါင်းအသင်းတွေ ကွန်ပျူတာပျက်တော့ စီဒီအယ်ဘန်တခုနဲ့ သွားသွားသွင်း၊ ထိုင်စောင့်ရတာမျိုးတွေမဖြစ်ပဲ အချိန်ကုန်သက်သာတဲ့နည်းဆိုပါတော့။ စီဒီထက်စာရင် ယူအက်စ်ဘီက အများကြီးပိုမြန်ပြီး အရွယ်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းက တဦးချင်းစီတွေမှာ ရှိတဲ့ဒေတာတွေအကုန် ဆာယိုနရဖြစ်သွားမှာမို့မလုပ်ခင် ဘက်ကပ်တော့ လုပ်ကြပါလို့ (အထူး) သတိပေးလိုပါတယ်။
ပျက်တော့မှ ကယ်ပါပြုပါဆိုရင် ဒေတာရီကာဗာရီစင်တာပို့ ရမှာမို့ငွေတွေ ဘိုင့်ဘိုင် ဖြစ်သွားမှာမို့ပါ။
လွယ်သမှ တအားလွယ်တာပါ။ သူများဝက်ဘ်ဆိုက်က စာတွေ တိုက်ရိုက်ကူးတင်လိုက်ရုံပါပဲ။ ကော်ပီ-ပေ့စ်ပေါ့နော။ ၅မိနစ်မကြာပါဘူး။
အဲ..သိချင်တာတွေ ကော်မန့် မှာ မေးသွားကြဗျို့ ၊ သိတဲ့သူတွေဖြေပါလိမ့်မယ်..။ အဲဒီစာတွေတောင်ဖတ်ရပျင်းတယ်။ အဆင်သင့်ရယ်ဒီ လုပ်ပြီးသား USB Stick လေးလိုချင်ရင်လည်း ပြောပါ။ နီးနီးနားနားဆို စာတိုက်က လေယဉ်ပျံနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ XP မှ မဟုတ်ပဲ Vista တွေ Windows 7တွေလည်း အကုန်လုပ်လို့ရပါကြောင်း…။
Update: Before you try all of this, you may want to try using WinToFlash,autility designed to createabootable Windows flash drive for Windows XP/Vista/7/Server. (via Download Squad). If this works for you, you can skip the section on preparingaflash drive and jump straight to the installation instructions. Also, keep in mind, these notes were written for installing Windows XP on the HP 2133 Mini-Note. Although many of these steps will apply for different computers, some of the commands may differalittle bit.
Update 2: If you’re trying to install Windows7onanetbook, Microsoft is making things even easier. Just use the Windows7USB tool.
You may also need to edit the boot.ini file manually if it doesn’t read something like ‘multi(o)disk(0)rdisk(o)partition(1)Windows=”Windows XP Pro” /fastdetect’
ဟူး……..မြန်မာလိုလေးဖတ်ချင်ပါတယ်ဆို..E လို တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ..
ခတ်ဘူးလား … အချိန်ရရင် မြန်မာလိုရှာပြီး ပြန်တင်ပေးပါဦး..။
အဲ့လောက်လဲစိတ်မညစ်နေကြနဲ့လေ bootable usb software ရှိတယ်။ စမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့တော့အချိန်မရတော့လို့ မတင်ပေးတော့ဘူး.လိုအပ်တာကတော့ windows7dvd တစ်ချပ်ရယ် usb stickရယ် bootable usb software ဒါဘဲလိုပါတယ်။ bootable usb software ကိုတော့google မှာရှာကြည့်ပေတော့ဗျာ။ ပထမဆုံး usb stick ကိုformat ချပါမယ်။ပြီးရင်တော့ windows7 dvd ကို စက်ထဲထည့်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ software လေးသုံးပြီးတော့ စမ်းကြည့်ပေတော့ဗျို့။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ကွန်ပြူတာကို restart ချ။ stick ကို စက်ထဲမှာထိုးထား။ပြိးရင် motherboard ထဲက bios ထဲသွား first boot device မှာ usb driveလို့ပြောင်း။ ပြီးရင်မ်ိန့်မိန့်ကြီးထိုင်ပြီးတော့ ကြည့်ပေတော့ဗျို့။ ခါတိုင်းwindows တင်သလိုဘဲတက်လာလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ motherboard တွေက usb ကို boot မပေးတာတွေရှိတယ်.။motherboard model အနိမ့်တွေမှာဆိုရင်တော့မရဘူး။ခုထွက်တဲ့ဟာတွေဘဲရတယ်။
အပေါ်မှာ ဆေ့ာဝဲရရမဲ့နေရာ ရေးထားပါတယ်။ အတိအကျလင့်က..
နက်ဘုတ်တွေခေတ်မို့ …စီဒီမပါ။ ဒီဗီဒီပလေးလို့မရတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေအတွက်ပေါ့။